Estradiol Benzoate jekiseni (inonzi estrogen) - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Estradiol Benzoate jekiseni (inonzi estrogen) [Description] chigadzirwa Uyu rakachenuruka tsvuku segirazi jikichira zvokunwa. [Rinoshanda uye kushandiswa] Inogona kusimudzira kukura zvepabonde zviratidzo rechipiri uye paumbwe kurara nhengo mhuka hadzi, kuwedzera mashandiro marwadzo nokuda uteruses uye oviducts, kuwedzera nehanya kuti uteruses kuti oxytocin, uye nekusimudzira kutandara muromo wechibereko urege orifices. It anokwanisa kusimudzira chitange mammary mutsinga dzinofamba nemukaka hurongwa. With shoma progesterone ...
Estradiol Benzoate jekiseni (E strogen )
chigadzirwa Uyu rakachenuruka tsvuku segirazi jikichira zvokunwa.
Inogona kukurudzira kukura zvepabonde zviratidzo rechipiri uye paumbwe kurara nhengo mhuka hadzi, kuwedzera mashandiro marwadzo nokuda uteruses uye oviducts, kuwedzera nehanya kuti uteruses kuti oxytocin, uye nekusimudzira kutandara muromo wechibereko urege orifices. It anokwanisa kusimudzira chitange mammary mutsinga dzinofamba nemukaka hurongwa. With shoma progesterone, unogona kutoita mhuka hadzi kuti chido chokurara uye zvepabonde. chigadzirwa ichi zvinowanzodavirwa kushandiswa kuramba fetus membranes, endometritis, uye uterine pyometra pashure wakurukura mhuka hadzi. It anogona kushandiswa simba uterine tsandanyama kana pamwe rinoshandiswa oxytocin. Uyezve, zviri kushandiswa kukura kunoita mammary mumasero vari induction kuti lactation chemombe.
1. pamwe wakashandiswa Pregnant Mare Serum Gonadotropin kuti estrous zviratidzo pachena panguva kusimudzira estrus: kuitira kuti zviite kuti kuziva miedzo estrus uye kuti estrous zviratidzo pachena apo Pregnant Mare Serum Gonadotropin rinoshandiswa kusimudzira estrus, intramuscular jekiseni 6-8mg pakati estradiol benzoate anogona chinozoiswa pazuva rechipiri pashure kushandisa Pregnant Mare Serum Gonadotropin.
2. Kunatsiridza nehanya kuti uterine tsandanyama kuti oxytocin: Kushandiswa inonzi estrogen mubishi yokusununguka havagoni chete kukurudzira hwomukova remuromo orifices, asi kuwedzera nehanya kuti uterine tsandanyama kuti oxytocin. Pamberi jekiseni oxytocin, estradiol benzoate anofanira jekiseni, uye dosing riri sezvinotevera: 3-10 MG kuti nguruve, 5-20mg mombe, 10-20mg namabhiza, 1-3 MG makwai, 0.5-2.0mg nokuti imbwa, uye 0.2-0.5mg nokuda nekatsi.
3. nekurapwa zvirwere uterine: unogona kurapa endometritis, uterine inertia (subinvolution kuti dumbu), asi wakasara fetus membranes pashure pakukurukura kana pamwe rinoshandiswa oxytocin. Estradiol anofanira kutanga jekiseni (20-30mg nokuda guru zvipfuwo, 10-20mg nokuti pakati kadikidiki zvipfuwo, uye 5-10mg mhuka diki), uye anofanira oxytocin kushandiswa kunorapwa (75-100IU emombe namabhiza 30- 50IU nokuti nguruve uye makwai, 10-25IU kuti imbwa, uye 5-10IU nokuda nekatsi); intramuscular jekiseni kana intrauterine jekiseni anofanira kuiswa, kamwe ose 7 days.
4. Kutsigira estrus: dzakakwirira mishonga kubva estradiol benzoate zvingashandiswa kusimudzira estrus nemhaka yokuora anoestrus mhuka; Zvisinei, kuti estrus nguva ino kazhinji havagoni kupa kusimuka chaiko kukura follicle kuti ovulate, asi normalize ari estrus yatinofema. The dosing iri sezvinotevera: 10-20mg emombe namabhiza; 5-10mg nokuti renguruve; 3-5mg makwai.
1. mishonga High, refu kana kushandisa kukodzera kuti chigadzirwa ichi zvingakonzera ovarian cysts, kubvisa pamuviri, ovarian atrophy uye kurara kutenderera nokusungwa mhuka hadzi.
2. Contraindicated kwemhuka zvokudya.
3. chete kushandiswa mhuka kubereka.
4. Ko kubatwa ne vana.
Mazuva 28 mombe, makwai nenguruve (kudzidzira kufamba); 7 Mazuva mukaka (kudzidzira kufamba)
Previous: Dexamethasone Sodium Phosphate jekiseni
Next: Gonadotropin nokuti jekiseni (GnRH)
Estradiol Benzoate 0.2% jekiseni
Estradiol Benzoate jekiseni Animal
Oestradiol Benzoate jekiseni